ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၂-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၂-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ရဲတပ်ဖွဲ့ ညှဉ်းပန်းမှု ရပ်ရန် တောင်းဆို click
- အချုပ်သားနှစ်ဦးကို ရိုက်နှက်သည့် ထောင်ဝန်ထမ်းကို အင်းစိန်ထောင်ပိုင် အရေးယူသည်ဟု ဆို click
- ဒေါ်ဘောက်ဂျာကို မြစ်ကြီးနားနေအိမ်မှ ဖားကန့်ရဲစခန်းသို့ ဖမ်းဆီးထား၊ အမှု ၃ မှုဖြင့် တရားစွဲ click
- KIA တပ်ရင်း ၈ နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲဖြစ် click
- တရုတ်နယ်စပ် ဇိုင်းအောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် TV ဓာတ်မှန် မရှိမဖြစ် လိုအပ် click
- ဦးဝီရသူ တရားပွဲ ကျင်းပစဉ် လက်လုပ်ဗုံးတလုံး ပေါက်ကွဲ click
- မန္တလေးမြို့ တရားပွဲအနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၊ သုံးဦး ဒဏ်ရာရ click
- မန္တလေးမြို့ ပေါက်ကွဲမှုကို သံကြွပ်စ ထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားသော လက်လုပ်ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုဟု ယူဆ (ရုပ်သံ) click
- သမ္မတ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၊ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာ ဝင်ခွင့်မရ click
- လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်ဟု အစိုးရ ပြော (ရုပ်သံ) click
- ရခိုင်ဒုက္ခသည် စာရင်းပြန်ကောက်ရန် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကို အကူအညီတောင်း click
- အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂယာ ဗုံးခွဲမှု ရန်ကုန်တွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ click
- တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းပါ ဆောင်းပါးအား ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ ကန့်ကွက် click
- ဗိုလ်ချုပ်လက်ရေးမူစာအုပ် ယူဆောင်မှု ဒေသခံများ မကျေနပ် click
- တိုင်းရင်းသား သက်ကြီးနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များအား ဂါရ၀ပြုပွဲ click
- စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းသင့်ဟု ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ ပြောကြား (ရုပ်သံ) click
- ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ဆိုတာ တဦးနဲ့တဦး ယုံကြည်သစ္စာရှိခြင်းဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော (ရုပ်သံ) click
- ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီလည်း ပါဝင်တော့မည် click
- နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်လာဖို့ ပိုရှိမယ် (မေးမြန်းခန်း) click
- ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုအတွက် ရန်ပုံငွေ အနုပညာပြပွဲ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပ (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များ စိတ်ဝင်စားသော KNU နှင့် Geneva Call စာချုပ်ချုပ်ပွဲ click
- Geneva Call စာချုပ်ကို မည်သို့ အကောင်အထည် ဖော်ကြမည်နည်း click
- TNLA ကို မိုးကုန်ရင် စစ်ထိုးတော့မလား (ဆောင်းပါး) click
- ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီး အန္တရာယ် (ဆောင်းပါး) click
- နိုင်ငံတကာ အကူအညီများနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၌ ဘုရားဖူးများဖြင့် ပြည့်နှက် (ရုပ်သံ) click
- ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံဘုရား မြင်ကွင်းများ (ဓာတ်ပုံ) click
- ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်များကို ဘာသာပေါင်းစုံက ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူ (ရုပ်သံ) click
- ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကြေးသွန်းခေါင်းလောင်း မြောင်းမြမြို့တွင် သွန်းလုပ်မည် click
- မုတ္တမမြို့ဟောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရစေမည့် စာတမ်းဖတ်ပွဲ လုပ်မည် click
- အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင် လက်နက်များ ဖမ်းမိ click
- ဆာမူရိုင်းဂိုဏ်းပြဿနာ ချင်းမိုင်အာဏာပိုင်များနှင့် သျှမ်းအဖွဲ့ ပူးပေါင်းအဖြေရှာ click
- ထိုင်းငါးဖမ်းစက်လှေတွင် အဓမ္မခိုင်းစေခံနေရသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၆ ဦး လွတ်မြောက် click
- ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း ကုန်တင်သင်္ဘော တိမ်းမှောက် click
- သံလွင်မြစ်ကြောင်းရှိ ကျွန်းများ ဝယ်ယူရန် တရုတ်နှင့် ဂျပန်တို့ စိတ်ဝင်စား click
- မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်များကို အရှေ့တောင်အာရှ စီးပွားရေးနိုင်ငံများ စိုးရိမ် click
- အများပိုင်ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ပြီး စက်မှုဇုန်များကို လျှပ်စစ်မီးပေးရန် ပြင်ဆင် click
- ရန်ကုန် စီးပွားရေးမြို့တော်စီမံကိန်း တင်ဒါခေါ်ရန် ကြန့်ကြာဦးမည် click
- နာမည်ကြီး ပြည်ပအချိုရည်အများစု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝင်ရောက်နေသော်လည်း မြန်မာက မမှု click
- တောင်ကြီးမြို့ ရေရှားပါးမှု ဖြေရှင်းရန် ဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင် click
- မကွေးမြို့တွင် အကြီးဆုံး ဟိုတယ် ဖွင့်လှစ် click
- ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး ပူးပေါင်းကာ ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက် ဖွင့် click
- မန်း အခြေခံကျောင်းများ အဆင့်မြင့် ကျောင်းဆောင်သစ်များ ဆောက်ပေးမည် click
- သူငယ်တန်းကျောင်းသူ အဓမ္မပြုခံရမှု အတန်းဖော်များ စစ်ဆေးမေးမြန်းခွင့်မပြုနိုင်ဟု မိဘများ ဆို click
- မသန်စွမ်း ကလေးငယ်တဦး အဓမ္မကျင့်ခံရ click
- အတူပြန်နေရန် ခေါ်သည်ကို မလိုက်သဖြင့် ဇနီးဟောင်းကို ဓားနှင့် ထိုးသတ် click
- မန္တလေးတွင် ၇၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အဆိုတော် ဒေါ်မာမာအေး ကျင်းပ click
- လင်းလင်း၏ ‘သံမဏိလိပ်ပြာ’ စီးရီး အယ်လ်ဘမ်ပေါင်း ၅,၀ဝ၀ တရက်တည်း ကုန် click
- ၁၉ ကြိမ်မြောက် နယူးယောက် ရခိုင့်သင်္ကြန် စည်ကားစွာ ကျင်းပ click
- မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ကိုယ်ပိုင်ရုပ်သံလိုင်း တည်ထောင်ရန် အသင်းပိုင်ရှင်အချို့ ဆန္ဒရှိ click
- ပါကစ္စတန်တွင် သေဒဏ် ပြန်ပေးတော့မည် click
- အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနိုင် ဂျပန် အာဏာရ မဟာမိတ်အဖွဲ့က ပြုပြင်မှုလုပ်ရန် အာမခံ (ရုပ်သံ) click
- ကေဆောင်စက်မှုဇုန် ပြန်ဖွင့်ရန် တောင်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်များ ၅ ကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေး (ရုပ်သံ) click
- ဗုဒ္ဓဂါယာကို ဗုံးနှင့်တိုက်ခိုက်၍ ကော့စ်ဘဇားတွင် ဘာသာကြီး ၃ ရပ်မှ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ click
- အိန္ဒိယကလေးများ သေဆုံးစေသည့် ကျောင်းတွင်း နေ့လယ်စာ၌ ပိုးသတ်ဆေးများ ပါဝင် click
နိုင်ငံ.ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရာတွေ ၊ ၀န်ကြီးနေရာတွေ ၊
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တဖက်သတ် အနိုင် မဲတွေ စတဲံ.
အာဏာတွေကို ကြံ့ခိုင်ရေး (ကြံ.ဖွတ်ပါတီ) က ဘယ်လို
ရယူထားလဲ အားလုံးကသိနေတာဘဲဗျာ ၊
လွှတ်တော်ထဲ မှာ အတိုက်အခံ(ပြည်သူကိုယ်စားပြု) က
လက်တဆုပ် စာဘဲရှိတာပါ ။
အတိုက်အခံ NDF က ဒေါ်ဘောက်ဂျာ လိုမျိုး အခြားပါတီ
တွေ ကို ရန်သူလို သဘောထား ၊ အာဏာသုံး ရမယ် ရှာ
ဖမ်းဆီး တာမျိုး ကတော. မလုပ်သင်.ပါဘူး ၊
ဒီအချိန်က အမှန်တကယ် အပြောင်းလုပ်ဖို.ဆန္ဒ ရှိရင်
လက်တွဲ လုပ်ကြရမယ်. အချိန်ပါ ။
... အခြား ပြည်သူ. အကျိုး လုပ်သူတွေ ၊ အဖွဲ.အစည်း
၀င်တွေလည်း ထောင်ထဲထည်.ထည်. နေတာ တွေ.ရတယ် ။
၂၀၁၅ မှာ ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီက ပြည်သူတွေကို ဘယ်လို
မဲဆွယ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာပါလဲ ။